vibrators နှင့် "Dead Vagina Syndrome" (သုတေသနနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းသတင်းစာ) - Your Brain On Porn
လိင်ကုထုံးများသည်အမျိုးသမီးများအတွက်တုန်ခါမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်ဟုမကြာခဏပြောတတ်ကြသည်။ သို့သော်တုန်ခါမှုများသည်အမှန်တကယ်တွင်“ စူပါပုံမှန်လှုံ့ဆော်မှုများ” ဖြစ်သည်ဟူသောခိုင်လုံသောသက်သေသာဓကများရှိနေပြီး၎င်းသည်လူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်လိုက်ဖက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အချို့သောအသုံးပြုသူများအတွက်ဤအရာသည်မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုနှင့်ကျေနပ်မှုလျော့နည်းစေသည်။
Mid-2018 မှာတော့သက်ဆိုင်ရာ vibrator သုတေသနနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းစာနယ်ဇင်းများအတွက်ရှာဖွေရေး vibrator အသုံးပြုမှုတချို့ vibrator အသုံးပြုသူများသည်အတွက်လိင်ဆက်ဆံမှုကာလအတွင်းနောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်လျှော့ချတာဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိ၏ပြဿနာအပေါ်ကောက်ယူခဲ့သည်။ ရှိပါတယ် ပွိုင့်အပေါ်ကိုတိုက်ရိုက်သုတေသနမျှ (အရုပ်မပါသောလိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်းအတိတ်တုန်ခါသူအသုံးပြုခြင်း၏ဆိုးကျိုးများကိုစစ်ဆေးခြင်း) ။ တုန်ခါမှုများကိုမြင်နိုင်သောလေ့လာမှုသုံးခုမှာ Church & Dwight, Trojan ၏မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သောလိင်ကစားစရာများထုတ်လုပ်ရေးအတွက်အဓိကဌာနခွဲရှိသောကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ဒီကုမ္ပဏီသည်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုဤကုမ္ပဏီကစိတ်ဝင်စားခဲ့သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်န်ထမ်းများ၏တဦးတည်း အားလုံး3Co-ရေးသား။
ဘက်မလိုက်တိုက်ရိုက်-on-အမှတ်သုတေသန၏မရှိခြင်း Web ပေါ်ရှိကျယ်ပြန့်မတူကွဲပြားထင်မြင်ချက်များကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဥပမာ:
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တုန်ခါစေတဲ့တုန်ခါသူတွေကဘယ်သူ့ကိုမှ“ desensitizing” ပြုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှမကြားဖူးတဲ့သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုမှသော်လည်းကောင်း၊ လူရဲ့ဇီဝကမ္မဗေဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့သိသမျှအရာအားလုံး - မှမသိတာ၊ အားလုံးဟာအဝိဇ္ဇာ၊ ကြောက်ရွံ့မှု၊ ထိန်းချုပ်မှု။ http://www.scarleteen.com/article/advice/do_vibrators_cause_a_loss_of_sensitivity
အင်တာနက်ပေါ်ကအမျိုးသမီးတွေရဲ့အကူအညီတွေကိုသူတို့တောင်းမခံတာကိုသူတို့ဖတ်သင့်တယ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ၏ဖြေကြားချက်အများစုသည်မသိဘဲထင်မြင်ချက်သာဖြစ်သည်။ သူတို့ကအမျိုးသမီးတွေကိုပြောတာကအာရုံပြန်ကောင်းလာမယ်၊ ဒါကယာယီပြproblemနာပဲ။ ကောင်းပြီ, ငါ့အာရုံလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ဘယ်တော့မှပြန်လာပါဘူး။ vibrator များသည်ပျက်စီးမှုကိုမဖြစ်စေကြောင်းကျွန်ုပ်အားမပြောပါနှင့်။ https://www.medhelp.org/posts/Sexual-Health/What-evidence-do-you-have-that-vibrators-dont-cause-nerve-damage/show/2465319
သိပ္ပံပညာ၏ကိစ္စအဖြစ်, ကိစ္စကိုလိင်ကစားစရာ (နှင့်အတောမသတ်ဝတ္ထုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း) ကဲ့သို့သော supernormal လှုံ့ဆော်မှုအချို့ vibrator အသုံးပြုသူများသည်အတွက်ကစားစရာ-အခမဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုစဉ်အတွင်းတုန့်ပြန်လျော့နည်းကျဆင်းနိုင်ပါတယ်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ အကွိမျမြားစှာသို့ရာတွင်သုတေသန (သို့သော်နေဆဲမဟုတ်တိုက်ရိုက်အချက်ပေါ်) သူတို့လုပ်နိုင်နှင့်အနီးဆုံးလို့ပြောရှာတွေ့အမျိုးသမီး vibrator အသုံးပြုသူ 16.5% "ထုံ" ယာယီကအများစုကဖော်ပြခဲ့သည်။ နောက်တဖန်လိင်ကစားစရာမှကျိန် ဆို. ပူဇော်ကွဲပြားခြင်းနှင့်အတူကုမ္ပဏီအသုံးပြုပုံကြောင်းလေ့လာမှုငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည် (နှင့်ပူးတွဲရေးသားခဲ့ပါတယ်) ။ (ပိုမိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော)
ဒါဟာ sexologists တိုက်ရိုက်နှင့်ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျဒီဖြစ်စဉ်သုတေသနပြုကြသည်မဟုတ်ကြောင်းမငြိမ်ပါပဲ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနှင့်အတူအမျှကြောင့် (1) အသုံးပြုသူများအားလိုအပ်ပေလိမ့်မည်ယာယီလိင်ဆက်ဆံမှုမိတ်ဖက်နှင့်အတူ vibrator အသုံးပြုမှုရပ်တန့်နှင့်မည်သည့်အပြောင်းအလဲများသတင်းပို့, သို့မဟုတ် (2) အသစ်များကိုအသုံးပြုသူများသည်မည်သည့်အပြောင်းအလဲများကိုသတင်းပို့ပါ။
ဤခေါင်းစဉ် sexologists များအတွက်အဓိကပညာသင်နှစ် listserve အပေါ်သုတေသီများအစစ်အမှန်မိတ်ဖက်ဖို့ဆွဲဆောင်မှု၏ ED နှင့်အရှုံးနှင့်အတူလုလင်တို့သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖြတ်ပြီးနောက်နှစ်ဦးစလုံးနောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ကြနှင့် sexology သုတေသီများသုတေသနပြုဖို့လိုအပ်ကြောင်း (ကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ထက်ပို) သတိပေးခဲ့ကြသည့်အခါများဆင်တူဖြစ်ပါသည် အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရဲ့ဆိုးကျိုးများ။ "ရီစရာဖြစ်မနေပါနဲ့။ အဲဒီကြံ့သုတေသနနဲ့တူပါလိမ့်မယ် "သူတို့ထဲကတစ်ဦးကဆိုသည်။
ဒါကလက်မခံတုံ့ပြန်မှုတစ်ချိန်တည်းမှာ, Kinsey သုတေသီများမကြာသေးမီကအရက်ဆိုင်များနှင့် bathhouse အတွက်ညစ်ညမ်း streaming မှလေးစားမှုတွေနဲ့အတူတူဖြစ်ရပ်ဆန်းအစီရင်ခံခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုရှိနေသော်လည်းရောက် လာ. , Dual Control Model - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်အပြုအမူများတွင်လိင်ဆိုင်ရာတားမြစ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၏အခန်းကဏ္ ((၂၀၀၇)။ စာရေးသူတစ်ခုမှာပင် sexology listserve အပေါ်ခဲ့ပါတယ် ... အလျှင်းဟုပြောသည်။
သိပ္ပံများတွင်အဖြစ်ထိရောက်သောဘာမှမရှိဘူးင် မဟုတ် သငျသညျကိုတှေ့ချင်ကြပါဘူး, နှင့်အတူတူပင်ကဒီမှာသက်ဆိုင်လျှင်တစ်ခုခုရှာဖွေနေ။ လိင်ကုသနဲ့သူတို့ရဲ့သုတေသီများကြိုတင်မှာကြားထားစရာမလိုဘဲလိင်ကစားစရာ (နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို) အကြံပြုခဲ့ကြသည်။ Alas, ဒီချဉ်းကပ်မှုသေချာပေါက်တစ်ဦး "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး" မစ်ရှင်အစေခံမထားဘူး။
Of သင်တန်း ကလူကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာ orgasm နှင့်လိင်အကူအညီအထောက်အပံ့များပိုမို arousal သတင်းပို့ပါ။ ခေါ်မယ့်လေ့လာမှုတွင် "အမျိုးသမီးများအကြား vibrator ကိုအသုံးပြုခြင်း၏လက်ခဏာ (1996)", "တစ်ဦးကအများစု vibrator ဆွခြင်းဖြင့်အစပျိုး orgasm အခြားသူတွေထက်ပိုမိုပြင်းထန်သောခဲ့ကြသည်ညွှန်ပြ။ လိင်အကူအညီအထောက်အပံ့များကို" လိင်အကူအညီအထောက်အပံ့များဟုခေါ်ကြသည်အဘယ်ကြောင့်မယ့်ဒါက "။ "
သို့သျောလညျးအမြိုးသမီးမြားကစားစရာ (နှင့်ပူးပေါင်းလိင်ကာလအတွင်းလိင်ဆက်ဆံခံစားရန်အတှေ့အကွုံကိုလျှော့ချနိုင်စွမ်း) နဲ့ပိုမိုလွယ်ကူစွာ orgasm အတိုင်းအတာအထိပြုလုပ်လိင်ကစားစရာအမှန်တကယ်လူသားတစ်ဦးဖက်နေဖြင့်ကော်ပီပွားယူမရနိုငျသက်ရောက်မှုရာ၏ "supernormal လှုံ့ဆော်မှု," ဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ် ။ နှင့်ကစားစရာ ပို. ပို. ဆွဲဆောင်မှု - ကဲ့သို့သော, vibrators ပူးပေါင်းလိင်လျော့နည်းကျေနပ်စရာဖြစ်လာထိုကဲ့သို့သောကြောင်းအသုံးပြုသူများ '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအခြေအနေဖြစ်နိုင်သည်။
ပြည်သူ့ထွက်ရှိသောအပြည့်အဝအသိပညာ, မတဘက်စောင်းနင်းဖြစ်တဲ့အမြင်အပေါ်အခြေခံပြီး vibrators သုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလုပ်သင့်ပါတယ်။
ဤဖြစ်စဉ်သည်အင်တာနက်အမည်ပြောင်ဖြစ်သော“ Dead Vagina Syndrome” (ပို၍ မှန်ကန်စွာ“ dead clitoris syndrome?”) နှင့်၎င်း၏မီဒီယာကတကယ့်အဖြစ်မှန်ကိုငြင်းဆိုရန်တွန်းအားပေးနေသည်။ တူညီသော“ စိတ်ချရသော” ဆောင်းပါးများတွင်စကားများသည့်အတိအကျပြောသောဆရာဝန်များစွာကပြသခဲ့သည်။ Hmmm …
ဒီစုဆောင်းမှု၏ကျန်ရှိသောသုတေသန, ဖိုရမ်များပေါ်တွင်တွေ့မြင်ဇာတ်လမ်းများ, နှင့်ဘာသာရပ်ပေါ်က်ဘ်အနေဖြင့်ဆောင်းပါးများသို့ခွဲခြားထားတယ်။
UPDATE: စက်မှုလုပ်ငန်းသည်“ ငှားရမ်းရန်” သုတေသီနှင့်အတူ vibrator အသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သည်။ အမျိုးသမီးများနေ့သူတို့တစ်တွေလိင်ကစားစရာကိုသုံးပါလျှင်သစ်သုတေသနပြုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်ရှည်နဲ့အထွတ်အထိပ်မြန်အထိလေးစက္ကန့် orgasm ခံစားနိုငျ။ ဒါတောင်မှအမြိုးသမီးမြား vibrator အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောနေမကောင်းသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံရန်ဆက်လက်: အမျိုးသမီးအသက်အရွယ် 30s - သာတစ်ဦးတည်း, ယောက်ျားနှင့်အတူ orgasm နိုင်ခြင်း - အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ယခုအချိန်အထိ!
လျှပ်စစ် vibrator အထောက်အပံ့ကိုမိတ်ဆက်ပြီးနောက်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏လိင်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်မျှော်လင့်ချက်များပြောင်းလဲခြင်း။
ဘယ်တော့လဲ သုတေသီများနေရာ၌ရှိနေသော်လည်း 19 vibrator အသုံးပြုသူအသစ်များ၊ “ အမျိုးသမီးတွေဟာ vibrator ကိုစတင်သုံးစွဲတဲ့အခါသူတို့ရဲ့နှိုးဆွမှုနှင့်အော်ဂဇင်တုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲမှုအကြောင်းအများကြီးပြောခဲ့သည်။ …ထူးခြားသည်မှာအမျိုးသမီးရှစ်ယောက်ကတုန်ခါမှုကိုမှီခိုရန်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းတိုက်ရိုက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးသုံး ဦး သာလျှင်သူတို့၏လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာလိင်ဘဝများကိုတုန်ခါခြင်းဖြင့်မြှင့်တင်ခြင်းအကြောင်းအထူးပြောဆိုခဲ့သည်။
ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အမျိုးသမီးများအားဖြင့်တုန်ခါအသုံးပြုခြင်း၏လက်ခဏာ: တစ် National ကိုယ်စားလှယ်လေ့လာမှုကနေရလဒ်များ.
မှတ်စု: လိင်ကစားစရာဌာနခွဲရှိသော Trojan (Church & Dwight Co. ) ကုမ္ပဏီ၏မိဘကုမ္ပဏီမှငွေကြေးထောက်ပံ့သည်။ ထို့အပြင်ပူးတွဲစာရေးသူတစ် ဦး မှာ C&D ဖြစ်သည် ဝန်ထမ်း:
အကျိုးစီးပွား၏ပဋိပက္ခ: Annahita Ghassemi သည် Church & Dwight Co. , Inc, ဤသုတေသနလေ့လာမှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့သောကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
အခြားစာရေးဆရာများ Indiana ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ဒါမှမဟုတ် Kinsey Institute မှဖြစ်စေနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သညျ။
အမြိုးသမီးမြား၏လုနီးပါး 30% vibrator ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေလိင်အင်္ဂါလက္ခဏာတွေတွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ 16.5% (95% CI, 14.3-18.7%) ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်းယာယီကြောင့်အများစုအစဉ်အတွေ့အကြုံရှိလိင်အင်္ဂါထုံရှိခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အဝအပိုဒ်:
အသုံးပြုသူများအနက် ၇၁.၅% (၉၅% CI၊ ၆၈.၈ မှ ၇၄.၂%) သည် vibrator အသုံးပြုခြင်းမှမည်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုမျှမကြုံဖူးကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဇယား ၅ တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းစုစုပေါင်း ၁၆.၅% (၉၅% CI၊ ၁၄.၃ - ၁၈.၇%) သည်အစဉ်အမြဲလိင်အင်္ဂါထုံခြင်းကိုခံစားခဲ့ရပြီး 71.5% (95% CI, 68.8–74.2%) သည်ထိုတစ်နေ့သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုကြာသည်ကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ။ ထုံနေသည့်အစီရင်ခံမှုတွင်ပျမ်းမျှပြင်းထန်မှုနှုန်းမှာ (၁၀ မှတ်မှတ်ဖြင့်) ၄.၀ ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ၃.၀% (၉၅% CI၊ ၂.၀ မှ ၄.၀%) သည် vibrator အသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောလိင်အင်္ဂါနာကျင်မှုခံစားခဲ့ရဖူးကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ၀.၆% (၉၅% CI, 5-16.5) သည်တစ်နေ့သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောနာကျင်မှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ နာကျင်မှုဝေဒနာရှင်များအနက်ပျမ်းမျှပြင်းထန်မှုရမှတ်မှာ ၃.၀ ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများ၏စုစုပေါင်း ၉.၉% (၉၅% CI၊ ၈.၁ မှ ၁၁.၇%) သည်တုန်ခါမှုကိုအသုံးပြုခြင်းမှလိင်အင်္ဂါအမျက်ဒေါသကိုခံစားခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ၂.၆% (၉၅% CI၊ ၁.၆–၃.၆%) သည်တစ်နေ့သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောကြာရှည်နာကျင်မှုများကိုအစီရင်ခံသည်။ စိတ်တိုနေသူများထဲတွင်ပျမ်းမျှဆိုးရွားမှုနှုန်းမှာ ၄.၀ ရှိသည်။ အသုံးပြုသူ ၈.၀% (၉၅% CI၊ ၆.၄-၉.၆%) မှ ၁.၅% (၉၅% CI, 95-14.3%) မှ ၁.၅% နှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းရောင်ရမ်းခြင်း / ရောင်ရမ်းခြင်းကိုတစ်နေ့သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုကြာအောင်ရောင်ခြင်း / ရောင်ရမ်းခြင်းများကိုသတင်းပို့သည်။ ရောင်ခြင်း / ရောင်ရမ်းခြင်းအတွက်ပျမ်းမျှပြင်းထန်မှုရမှတ်မှာ ၄.၀ ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူ ၁.၁% သောသုံးစွဲသူများ (18.7% CI, 0.5-95 0.1%) သည်တုန်ခါမှုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မျက်ရည်ကျခြင်းသို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းများကိုပျမ်းမျှပြင်းထန်မှုရမှတ် ၁.၀ ဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါသုတေသီများမိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းတုန့်ပြန်လျော့နည်းသွားရှိခဲ့ပါသည်ရှိမရှိမမေးခဲ့ချေ။ ထိုသူတို့ကတစ်ဦးမျှသာ "သမိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်" အဖြစ်ဒီဖြစ်နိုင်ခြေ "ပတ်ချာ":
"သို့သော် vibrator ကိုအသုံးပြုခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦး vibrator နှင့်အတူပိုမိုလွယ်ကူစွာအော်ဂဇင်ကြုံနေရနှင့်လျော့နည်းနိုင်အောင်တနာတစ်ဦးနှင့်အတူ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအထူးသဖြင့်နည်းလမ်းများကိုမှအမျိုးသမီးများ၏ habituate စေခြင်းငှါသမိုင်းယုံကြည်ချက်ပေးထားအနာဂတ်သုတေသနအတိုင်းအတာအမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုလေ့ဖြစ်လာအရာကိုအကဲဖြတ်စဉ်းစားသင့် -or, တနည်း, မြှင့်တင်ရန်အတွက် vibrator အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ "
မိန်းမတကာတို့ထက် vibrator အသုံးပြုမှုဝိသေသလက္ခဏာများ
(1996, နမူနာ vibrator ဝယ်ယူသူများထံမှကိုစုဝေးစေကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်။ 37% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစု, 54% သီးသန့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ခဲ့)
စာရေးသူအချို့ (ဥပမာ - Heiman, Lo- Piccolo, & LoPiccolo, 1976; Masters & Johnson, 1986) သည်အမျိုးသမီးများအားလိင်မှုနှိုးဆွမှုကိုမြင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်အော်ဂဇင်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန် vibrator အသုံးပြုရန်တိုက်တွန်းသော်လည်းအခြားသူများ (ဥပမာ - Kaplan, 1974) အမျိုးသမီးသည်တုန်ခါမှုကိုမှီခိုလွန်းခြင်းကြောင့်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုနည်းသည်။ အကယ်၍ vibrator သည်အလွန်ကျယ်ပြန့်စွာမှီခိုနေပါကအမျိုးသမီးများသည်အော်ဂဇင်ကိုအခြားနည်းများဖြင့်မခံစားရနိုင်တော့ဟု Kaplan ကပြောကြားခဲ့သည်။
... တစ်ဦးတည်းအော်ဂဇင်ကြုံနေရအမျိုးသမီးများမှာ vibrator များသောအားဖြင့်သို့မဟုတ်အစဉ်အမြဲဖြစ်ပေါ်အော်ဂဇင်နဲ့ clitoral ဆွညွှန်း, clitoral vibrator နဲ့ clitoral-လက်စွဲစာအုပ်ဆွအထိရောက်ဆုံးဖြစ်နီးပါး 80% တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
... လူမျိုးသမီး (n = 123) တစ်ဦး vibrator အသုံးမခံခဲ့ရသည့်အခါတစ်ဦးအော်ဂဇင်ဟာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်, vibrator ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်နှိုးဆွသောအခါသူတို့ကြုံတွေ့ခံစားခကျြအကြားခြားနားချက်များရှိလျှင်, ဖော်ပြခဲ့သည်။ တစ်ဦးကအများစု orgasm တစ် vibrator (စားပွဲတင်4ကိုကြည့်ပါ) နှင့်အတူအားကောင်းခဲ့ကြသည်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဆယ်ပါးအမျိုးသမီး vibrator ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူသူတို့သာအတွေ့အကြုံရှိအော်ဂဇင်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
... Self-stimulation ပူးပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများခဲ့ကြသည်ထက်အော်ဂဇင်ထွက်လာပါတယ်ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ခဲ့သည်။ အများစုကအမျိုးသမီးတွေလည်းနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးတည်းနှင့်မိတ်ဖက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ orgasm အတှေ့အကွုံမြား၏ကြိမ်နှုန်းသို့မဟုတ်ကိုက်ညီမှုအနည်းဆုံးအတန်အသင့်ကျေနပ်မှုရှိကြ၏။ ဒါကသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူသို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်တစ်ဖက်နှင့်အတူဖြစ်စေ, အခြားနည်းလမ်းဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုမရှိခြင်းများအတွက်လျော်ကြေးပေးရန် vibrator ကို အသုံးပြု. ကိုမကျေနပ်အမျိုးသမီးနမူနာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒေတာကို vibrator အသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိခြင်းခံခဲ့ရအကြံပြုခဲ့ပါဘူး မပါဘဲ အသုံးပြုသူများနှင့်သုံးစွဲသူများမဟုတ်သူများအကြားလိင်ဆက်ဆံခြင်းပြုစဉ်အတွင်းတုန်ခါမှုကိုအသုံးပြုသည်၊ သို့သော်ဒေတာမရှိပါ။ နမူနာတစ်ခုလုံးသည်အခြားတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်နည်းလမ်းများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်တုန်ခါမှုကိုအသုံးပြုသည်။
vibratory ဆွနှင့်အတူလက်တွေ့နှင့်သုတေသနစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ: ဘုံဆွ Device ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုများနှင့်လေယာဉ်မှူးလေ့လာမှု
(အစား In-Vivo ထက်နည်းစနစ် vibrators စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဘုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွထုတ်ကုန်များ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများအကဲဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ )
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွအတှကျအသုံးပွု [Abstract မှစ. ] ခုနစ် vibrators အကြိမ်ရေ, ရွှေ့ပြောင်းခံရနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏အရှိန်များကိုတွက်ချက်ရန်မိမိတို့၏အိုးအိမ်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားတစ်ဦးများကို piezoelectric accelerometer ကို အသုံးပြု. စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ Vibratory အကြိမ်ရေμm 43 မှ 148 ထံမှ 37 Hz, 783 ထံမှရွှေ့ပြောင်းခံရအရွယ်ရှိနှင့် 18 ထံမှ 311 m / s ကိုအရှိန်2။ အဆိုပါအကွာအဝေးဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြု vibrators အလွန်နေချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဆွတိုးမြှင့်နိုင်အကြံပြု တချို့ devices တွေကိုအမှန်တကယ်ယာယီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ sensitivity ကိုလျော့နည်းကျဆင်းစေခြင်းငှါ။ တစ်ဦးအတွက် Vivo လေ့လာမှု sensitivity ကို၏အလားအလာဆုံးရှုံးမှုလျော့ပါးစေရန်စဉ်လိင်စိတ်နိုးထတိုးမြှင့်နိုင်အသုံးပြုမှုပုံစံများသွင်ပြင်လက္ခဏာများနိုင်ဘူး။
ဖောက်သည်များသည်တုန်ခါမှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ“ crutch” ဖြစ်လာခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ sensitivity ကိုလျော့နည်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုအစီရင်ခံနိုင်သည်။ (Heiman & LoPiccolo, 1988) ဤအကြောက်စိတ်အချို့သည်တစိတ်တပိုင်းမျှတသည်ဟုထင်ရသည်။ တိုတောင်းသောသက်တမ်းညှိနှိုင်းမှုသည်တုန်ခါမှုလှုံ့ဆော်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ထိုကဲ့သို့သောတုန်ခါမှုလှုံ့ဆော်မှုပြီးနောက် ၁၅ စက္ကန့်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းအားဖြင့်တုန်ခါမှုမစခင်ကြိုတင်ခွဲခြားခြင်းမပြုနိုင်သကဲ့သို့ (Tommerdahl et al ။ , 15) ။ သို့သော် vibrator များသည်နောက်ဆက်တွဲ sensitivity ကိုလျော့ချရာတွင် manual stimulation နှင့်မတူညီပါ။ [this ဤကဲ့သို့သောမိုက်မဲသောကြေညာချက်တစ်ခုအရ Team Prause သည်မည်သူဆောင်ရွက်သည်ကိုမေးမြန်းရန်လိုသည်။ ]
စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားရန်ပူးတွဲမှု, vibrator အသုံးပြုမှု, စအိုလိင်ဆက်ဆံနှင့်ချို့ယွင်းအင်္ဂါဇာတ်အော်ဂဇင်။
စိုးရိမျပူးတွဲဖိုင်ကိုပြောင်အင်္ဂါဇာတ်အော်ဂဇင်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနဲ့ဆက်စပ်ပေမယ့်တုန်ခါခြင်းနှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံ orgasm မြင့်မားအကြိမ်ရေနှင့်အတူခဲ့သည်။ ရှောင်ကြဉ်ပါပူးတွဲဖိုင်ကို vibrator orgasm မြင့်မားအကြိမ်ရေနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ စိုးရိမျမဟုတ်သလိုကိုရှောင်ရှားကိုမပူးတွဲဖိုင်ကို penile-အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုမိတ်ဖက်၏တစ်သက်တာအရေအတွက်ကိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ orgasm ၏စိတ်ပိုင်းဖြတ်
(၂၀၁၆ - တုန်ခါမှုလေ့လာခြင်းမဟုတ်ပါ၊ မကြာသေးမီနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်)
... [အမျိုးသမီးများတွင်] တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းတွင်ပထမဆုံးအော်ဂဇင်၏အသက်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆက်မပြတ်ကျဆင်းနေသည်၊ သို့သော်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်ပထမဆုံးအော်ဂဇင်၏သက်တမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ မဖော်ပြထားပါ။ ယနေ့ခေတ်တွင်အမျိုးသမီးတစ်ဝက်သည်ပထမလိင်အင်္ဂါကိုတစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၌ပထမဆုံးအော်ဂဇင်ကိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီအနည်းဆုံး ၅ နှစ်မတိုင်မီကပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးလေ့ကျင့်ဖို့အချိန်ပိုမိုခဲ့ကြ မှတဆင့် သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုမပြုမီတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေမယ့်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းမည်သည့်အငယ်တစ်ဦးအော်ဂဇင်အောင်မြင်ရန်သူတို့ကိုအကူအညီပေးခဲ့သေးပါဘူး။ ဤရလဒ်မျှော်မှန်းချက်ကနေ diverges ။ (အလေးပေးထောက်ပံ့)
အချို့သောတွေ့ရှိချက်များ Brody, (တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဆင်းရဲတဲ့ကြားဆက်ဆံရေးအရည်အသွေး, အမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထရောဂါ, ချို့ယွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု, ချို့ယွင်းအော်ဂဇင် (အထူးသဖြင့်အင်္ဂါဇာတ်အော်ဂဇင်) ၏ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်နှင့်အတူနှင့်အခြားဆိုးရွားသောဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပင်ရှိပါသည် 2007) ။ ဒီလေ့လာမှုမှာအမျိုးသမီးဆက်ဆံရေးဟာအရည်အသွေးအတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြိမ်ရေမှဆက်စပ်မခံခဲ့ရပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုတက်ကြွစွာ masturbated သောမိန်းမတို့ကိုအကြားအနိမ့်ခဲ့သည်။
လိင်မှုဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ပြုခြင်းများတွင်အမျိုးသမီးများတုန်ခါမှုကိုအသုံးပြုခြင်း - ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားပြုစစ်တမ်းမှရလဒ်များ။
(ကိုယ့်အထက်ပိုမကြာသေးမီတဦးတည်းရှေ့ပြေးဖြစ်သော) ဤစာတမ်းသည်လည်း (ကလိင်-ကစားစရာကွဲပြားခြင်းနှင့်အတူ) Trojan တွေပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်နှင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဝန်ထမ်းကပူးတွဲရေးသားခဲ့သည်။ ထိုသို့ပြုကြသည် မဟုတ် တိုက်ရိုက် Non-vibrator အသုံးပြုသူများသည်သူတို့တွင်လိင်ဆက်ဆံမှုတုန့်ပြန်နှင့်အတူ vibrator အသုံးပြုသူများသည်သူတို့တွင်လိင်ဆက်ဆံမှုတုန့်ပြန်နှိုင်းယှဉ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ FSFI ၏“ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုနှုန်း” (“ အမျိုးသမီးလိင်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုညွှန်းကိန်း”) မေးခွန်းလွှာတွင်“ စိတ်ကျေနပ်မှုအရှိဆုံး”ဘယ်တော့မှ hetero နှင့် bi အမျိုးသမီးများအကြားအသုံးပြုသူများကို "။ ဒီကဒီစက်မှုလုပ်ငန်း - ကမကထလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့နည်းစနစ်များကဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်သောပြaနာတစ်ခုရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုပါသလား
လိင်ကွဲလူတို့တွင် vibrator အသုံးပြုမှုကိုမိတ်ဖက်အဆင့်အတန်းအားဖြင့်ကွဲပြား: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတစ်ဦးတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကို။
ယောက်ျားအပေါ်လေ့လာမှု, ဒါကြောင့်ဖို့သက်ဆိုင်ရာမဟုတ် "သေပြီလိင်အင်္ဂါ syndrome ရောဂါ။ " ဒီလေ့လာမှုလည်း Trojan တွေရဲ့မိဘကုမ္ပဏီကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်နှင့် Indiana ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ Herbenick (Kinsey) ကပူးတွဲရေးသားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး: တုန်ခါမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုလုံးဝစိတ်ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကောလိပ်တွင်တ ဦး တည်းကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ခေတ်သစ်လိင်ဆိုင်ရာစွမ်းအားရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုထင်ကာ၎င်းသည်အလုပ်ကိုမည်မျှထိရောက်စွာအောင်မြင်နိုင်မည်ကိုမယုံနိုင်ခဲ့ပါ။ အရမ်းကောင်းပါတယ် တစ်လအတွင်းမှာကျွန်မရဲ့ရည်းစားနဲ့အော်ဂဇင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး၊ ပြီးတော့လအနည်းငယ်အကြာမှာအဲဒါကိုကိုယ့်လက်နဲ့တောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ တုန်ခါသူသည်အမှိုက်ပုံးထဲရောက်သွားပြီးအပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏တုန့်ပြန်မှုသည်ပြန်ပေါ်လာသည်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာပြီးတဲ့နောက်အခုတောင်မှငါဟာတစ်ခါတစ်ရံအပြင်းအထန်လှုံ့ဆော်မှုကိုလက်လွတ်သွားတုန်းပဲ။ သို့သျောလညျးငါကျိန်းသေကျောက်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုရှိခြင်းလက်လွတ်မပါဘူး။
တစ်ဦးကကောင်လေး: ကျွန်မသူမတကယ်သူမ၏ vibrator ကို အသုံးပြု. သို့ရတယ်ဘယ်မှာသူမ၏အသက်တာ၌ကာလရှိခဲ့ပါသည်ကပြောပါတယ်သူတစ်ဦးရည်းစားရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမကဒါ desensitized ဖြစ်လာကြသောကြောင့်, ဒါပေမယ့်သူမလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူ orgasm မှမိမိကိုယ်ကိုလုံးဝမရခဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်တုန်ခါဆေးလိပ်ဖြတ်, ငါသူမပြန်ပုံမှန်ရ6လခနျ့သူ့ကိုသိမ်းပိုက်ဆိုပါတယ်ထင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် (မ vibrators အပေါ်ပေမယ့်မဆို supernormal လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွဖို့သက်ဆိုင်ရာ) ကောင်လေး: ကျွန်ုပ်၏အသက်အရွယ်အမျိုးသမီး ၃ ဦး တွင် ၁ ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်နေသည်။ ချစ်စရာမိန်းကလေးတစ်ယောက်က porn ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်အရမ်းအေးတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အလေးအနက်ထားရမယ်၊ ဒါကငါ့အတွက်ရောယေဘုယျပါလူတွေရောတကယ်ကောင်းတယ်၊ မကောင်းဘူး။ ကျွန်ုပ်၏အနာဂတ်ဇနီး၏ ဦး နှောက်ကိုညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်စေလိုသောကြောင့်သူမဘဝနှင့်ကျွန်ုပ်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွမ်းကျင်မှုသည်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသည်။ Jeez ဒီရွားလှသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်နှင့်အတူနည်းပညာသည်မည်မျှဆိုးရွားနေသည်ကိုတွေ့ရသည့်အတွက်ဝမ်းနည်းပါသည်။
ဒီဆောင်းပါးတွေအများစုမှာယေဘုယျအားဖြင့်သော့ချက်မေးခွန်းများမေး, သို့မဟုတ်လုံးဝမလူ့ဘာသာရပ်များပါဝင်သည့်အရာ (အစောပိုင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့) ကိုလေ့လာမှုအပေါ်မပြုခဲ့သောအထက်စက်မှုလုပ်ငန်း-ရန်ပုံငွေသုတေသနအပေါ်မှီခို, vibrator ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ "အဘယ်သူမျှမအစစ်အမှန်ပြဿနာ" ရှိကွောငျးကိုနိဂုံးချုပ်လိုက်သည်။ ဒီဘာသာရပ်တွင်တွေ့ဆောင်းပါးတွေမတ Indiana ပြည်နယ်စာရေးသူစက်မှုလုပ်ငန်း-ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့ကြကာစက်မှုလုပ်ငန်း-ဝန်ထမ်းကပူးတွဲရေးသားအပေါ်သို့မှီခိုလေ့လာနေသည်ဟုထောက်ပြသည်။
အောက်ကပစ္စည်းများထိရောက်သောဘာမှသက်သေမပြကြဘူး, ဒါပေမယ့်သူတို့ကဒီပြဿနာအများအပြားဆောင်းပါးများကိုဒီလျော့နည်းသွား-တုန့်ပြန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းပေါ်မှာရေးထားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းလုံလောက်စွာပုံဘုံကြောင်းပြသကြပါ။ သူတို့ရဲ့စကားပြောအချက်များနှင့်စုံစမ်းညှဉ်းဆဲခြင်းကိုမရှိခြင်း၏တူညီသောပေးထားသောဤအချို့တို့သည်အင်ဒီယားနားလေ့လာမှုများငွေကြေးထောက်ပံ့သောတူညီစက်မှုလုပ်ငန်းများက "ထားရှိ" နိုင်ပါသည်။
* 35, ငါ့မိတ်ဆွေတစ်ကိတ် "ငါ, ငါ့ vibrator အတူတက်ခြိုးဖောကျတာ" တိတ်တဆိတ်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Latt ကျော်ငါ့ကိုအကြောင်းကြားခဲ့သည်။ "ငါသည်သိသာတဲ့ကြောင့်ကိုချစ်သော်လည်းငါ့ရည်းစားကငါ့ကိုလျော့နည်းတုံ့ပြန်မှုစေသည်ထင်၏, သင်သိ သူ့ကို။ "ငါကသူ့ကိုဝန်ခံနေဖြင့်မအံ့သြခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ trusty Hitachi Magic Wand မပါဘဲအော်ဂဇင်ရောက်ရှိခဲအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်သူမ၏ပြောသည်ချင်ပါတယ်ပြီးနောက် My ကုထုံးမကြာသေးမီက ... ငါ့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ vi-ချိုးယူပြီးကြိုးစားရန်ငါ့ကိုမေးသော်ခဲ့သည်။
ပါးစပ်လိင်, ကို manual ဆွ, ဒါမှမဟုတ်လိင်ဆက်ဆံမှုကနေ - - သူမ၏ဘက်ထရီ-operated ရဲ့ buddy မရှိဘဲကယ်ရိုလိုင်းကသူအော်ဂဇင်နီးပါးနိုငျဖြစ်လာချင်ပါတယ်သဘောပေါက်လာတယ်။ "ဒါဟာငါ့ကိုယ်အရာအားလုံးကိုသော်လည်းပြင်းထန်သောမြန်နှုန်းမြင့် [တုန်ခါ] မှဖြစ်လာခဲ့ပြီးဘယ်လောက်ခံနိုင်ရည်ငါ့ကိုနီးပါးရှက်လုပ်" ဟုသူမကပြောပါတယ်။ "Jon ငါ့အပေါ်မှာမဆင်းသို့မဟုတ်မိမိလက်ကိုအသုံးပြုပြီးကြိုးစားကြည့်မယ်လို့ပေမယ့်အစဉ်အမြဲယူလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်စလုံးအရှုံးမပေးလိုငါ vibrator ပြန်ဖွင့်ချင်ပါတယ်။ "
သင် "သေလိင်အင်္ဂါ Syndrome" အကြောင်းစိုးရိမ်နေ Be သငျ့သလော
၁။ DVS သည်သင်၏ vibrator အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သေလွန်သောသူတို့သည်လိင်အင်္ဂါရောဂါ သင့်ရဲ့လိင်အင်္ဂါ sensitivity ကိုဆုံးရှုံးဖို့ဖြစ်ပေါ်စေလွန်းသင့်ရဲ့ vibrator ကို အသုံးပြု. ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒီအခွအေနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံပြင်တွေအများကြီးသင်ပယ်ရဖို့မစ္စတာဘက်ဇ်မှဖွင့်ပုံကိုမကြာခဏစိုးရိမ်လုပ်ပြီးပြီလိမ့်မယ်အရာ, ဖြန့်ရပြီ။
2 ။ ဘယ်လို DVS ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ဖြစ်ပျက်သနည်း? အိုကေဒါဆိုဘယ်လိုသေလွန်သောသူတို့သည်လိင်အင်္ဂါ syndrome ရောဂါဖြစ်ပေါ်စေရန်ဟုသင်သည်သင်၏ vibrator ကိုသင် clitoral နှင့်အင်္ဂါဇာတ်ဆွဆုံးရှုံးနိုင်အောင်အများကြီးအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာဆိုးရွားဖြင့်လည်းမှန်မှန်သင့်ရဲ့တုန်ခါပေါ် မူတည်. ရရှိသွားတဲ့, သင်အမှန်တကယ်လိင်စဉ်အတွင်းတစ်ဖက်နှင့်အတူတူသောအခြားမည်သည့်လမ်းအတွက် orgasm နိုင်ခြင်းဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်။ သင်သည်သင်၏ vibrator ကို အသုံးပြု. အပေါ်သယ်ဆောင်လျှင်သင်မည်သည့်အပျော်အပါးမရနိုငျသောလိင်အင်္ဂါနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကွောငျ့ကသေပြီပဲ။ ...
သေလွန်သောယောနိရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိရန်လိုအပ်သည်
သို့သော်သေလွန်သောသူတို့သည်လိင်အင်္ဂါ syndrome ရောဂါအမှန်တကယ်အရာကတကယ်တော့လဲ? သို့မဟုတ်ပါကတစ်ကိုယ်တော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးချွတ်အမျိုးသမီးတွေဝတ်တဲ့ဒဏ္ဍာရီပါသလဲ
သငျသညျမသိခဲ့ပါလြှငျ, သေလွန်သောသူတို့သည်လိင်အင်္ဂါ syndrome ရောဂါ vibrators ၏အသုံးပြုမှုကိုအောက်ပါအင်္ဂါဇာတ် sensitivity ကိုတစ်အကြီးအကျယ်ကျဆင်းခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
အဆိုပါသီအိုရီကိုသင် '' လွန်း '' တစ်ဦး vibrator ကိုသုံးပါလျှင်, သင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကိုအခြားနည်းလမ်းများမှတဆင့် orgasm ရန်သင့်အားမပေးနိုင်အောင်, clitoral နှင့်အင်္ဂါဇာတ်ဆွဖို့သည်းခံစိတ်ဆောင့်တတ်၏။ သင်သည်သင်၏ vibrator သုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ပါလျှင်အသေကောင်ကိုလိင်အင်္ဂါသဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့ပြောပါ, သင်၏လိင်အင်္ဂါသည်သင်၏လိင်အင်္ဂါအပျြောအပါးမဆိုကြင်နာဖို့လုံးဝသေဆုံး, ခံနိုင်ရည်ရှိလိမ့်မည်အဓိပ္ပာယ်လွန်းသောအာရုံခံစားမှုမှ desensitise ပါလိမ့်မယ်။
လက်ျာဘက်, ကြောက်စရာအသံ? ထိုသို့ ကဲ့သို့သော သဘာဝကျပါတယ်။ ပယ်ရတဲ့၏တဦးတည်းနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်ဖြစ်ကောင်းသင်သည်အခြားနည်းလမ်းကနေအော်ဂဇင်က trickier ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်လိင်အင်္ဂါ pals မကြောက်ပါဘူး။ ...
Quora တုံ့ပြန်မှု: အအစေ့တစ်ခု vibrator အကြောင်းမရှိပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု overusing နိုင်သလား? အာရုံကြောပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်?
သင့်ရဲ့တုန်ခါသင့်ရဲ့အော်ဂဇင်ဖျက်ဆီးသလဲ? (The Daily Dot)
လိင်ကစားစရာ ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးထက်ကဲ့သို့အကောင်းတစ်ဦးအရာ၏သိပ်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ နှင့် တချို့အမျိုးသမီးတွေအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ထိုကာလ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာသောပမာဏကိုအဘို့မိမိတို့ vibrators သုံးပြီးပြီးနောက်၎င်းတို့၏ယောနိပုအစေ့တစ်ခု jackhammer ၏တိုတောင်းသောဘာမျှသူတို့ကို orgasm ရကြလိမ့်မည်ရှိရာအမှတ်ဆွအများစုသည်အခြားပုံစံများမှ desensitized ဖြစ်လာကြပါပြီ။
... မည်သို့ပင်ဆိုစေ, အမျိုးသမီးတချို့ပါသေး ardently vibrators သူတို့ကို desensitized ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဠာတစ်အပိုင်းအစအတွက်, vibrator အသုံးပြုမှုနှစ်ကြာ "စာရေးဆရာ Lauren တားမြစ်" သေလိင်အင်္ဂါ Syndrome "ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖော်ပြထား" သို့မဟုတ်ယင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည်ဧကန်အမှန်အခေါ်အဖြစ်, DVS ။
"အခြေခံအားအာဏာ exfoliating ငါ၏အအမျိုးသမီးတစ်ယောက်စုတစုနှစ်ပေါင်းပြီးနောက်, ငါမဆိုအခြားလမ်းလာ SATs တာတွေနဲ့တန်းတူအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုအဆင့်ကိုလိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရ" တားမြစ်ရေးသားခဲ့သည်။ "ဒါဟာပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်။ လက်ချောင်းနှိုင်းယှဉ်လျှင် paled ။ ငါအနိုင်နိုင်တစ်ဦးလျှာကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ငါအစဉ်အမြဲသေလွန်သောသူတို့သည်ငါ့အအာရုံကြော vibrated ဖူးကြောက်တယ်ခဲ့ပါတယ်။ "
... TLDR: အလွန်အကျွံ vibrator အသုံးပြုမှုအနေဖြင့် "သေလိင်အင်္ဂါ Syndrome" ဖြစ်နိုင်မယ့်ဒဏ္ဍာရီဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှထွက်ရှာတွေ့မှတိကျသောစစ်ဆေးမှုများပြုမိရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်သိပ္ပံပညာရှင်များ, သေချာများအတွက်မသိရပါဘူး။
သာခိုင်ခံ့သောတုန်ခါမှုနှင့်အတူ Orgasming? ပြန်လည်ထိခိုက်လွယ်စေရန် 8 ခြေလှမ်းများ
ဖြေ ... အမျိုးသမီးတွေအများကြီးမှရှိခြင်းသတင်းပို့ သူတို့ရဲ့ vibrators များ၏ပြင်းထန်မှုအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်, သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအစွမ်းထက်မော်ဒယ်များဖို့ "အဆင့်မြှင့်" သူတို့ vibrators စောင့်ရှောက်ရန်ရှိခြင်း။
... ကံမကောင်းစွာပဲရှိတစ်ဦးအမှန်တကယ်ဇီဝကမ္မမှီခိုဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေမပြကြပြီဆိုအပြီးသတ်သောလေ့လာမှုများခဲ့ပေမယ့်များစွာသောမိန်းမမကြာခဏ vibrator အသုံးပြုမှု (လက်စွဲစာအုပ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့မဟုတ်ပါးစပ်လိင်မှတဆင့်နဲ့တူ) ကပိုခက်သည်အခြားနည်းလမ်းတွေထဲမှာအော်ဂဇင်ရောက်ရှိဖို့စေသည်သတင်းပို့ကြပြီမဟုတ် ။
သင့်တွင် vibrator များသည်အာရုံကြောကိုပျက်စီးစေခြင်းမရှိကြောင်းအဘယ်သက်သေအထောက်အထားရှိသနည်း။
အခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်တုန်ခါစက်နှင့်အတူအစေ့ကိုထိခိုက်နိုင်သည့်အထောက်အထားရှိသလားဟုမေးခဲ့သည်။ သင်က 'ငါကြားဖူးတာမဟုတ်ဘူး' လို့ပြောခဲ့တယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟာကလေ့လာမှုမလုပ်ရသေးတဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးလေ့လာမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပြတဲ့အထောက်အထားမရှိဘူးလို့ထင်လား။
အင်တာနက်ပေါ်ကအမျိုးသမီးတွေရဲ့အကူအညီတွေကိုသူတို့တောင်းမခံတာကိုသူတို့ဖတ်သင့်တယ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ၏ဖြေကြားချက်အများစုသည်မသိဘဲထင်မြင်ချက်သာဖြစ်သည်။ သူတို့ကအမျိုးသမီးတွေကိုပြောတာကအာရုံပြန်ကောင်းလာမယ်၊ ဒါကယာယီပြproblemနာပဲ။
ကောင်းပြီ, ငါ့အာရုံလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ဘယ်တော့မှပြန်လာပါဘူး။ vibrator များသည်ပျက်စီးမှုကိုမဖြစ်စေကြောင်းကျွန်ုပ်အားမပြောပါနှင့်။ ဤမသိသောအကြံဥာဏ်များသည်အခြားအမျိုးသမီးများအားတူညီသောပြofနာကိုကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီးတုန်ခါသူများကအမှန်တကယ်ပျက်စီးခြင်းနှင့်ပြtheနာကိုမည်သို့ကုသနိုင်ကြောင်းရှာဖွေခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေသည်။ ငါက clitoral အရေဖျားလှီးခဲ့တူသောငါခံစားရတယ်နှင့် NO ကငါ့စိတ်ထဲမှာအားလုံးမဟုတ်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၀ ရှိပြီဖြစ်ပြီး vibrator ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဝယ်ပြီးအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ခင်ပွန်းကငါ့ကိုတို့ထိရန်နှိုးဆွသောအခါသူကစိတ်ချမ်းသာသော်လည်းငါ orgasim မရနိုင်သည်ကိုယခုတွေ့ရသည်။ ငါတုန်ခါကိုအသုံးပြု။ တော့ဘူး။ ငါ့အာရုံကြောရဲ့အဆုံးကိုပျက်စီးစေနိုင်မလား။ ငါကသူ့ထိတွေ့မှုနှင့်အတူထိုတွင်ခံစားရနိုင်ပါလိမ့်မယ် ... အဲဒီဒေသမှာခံစားချက်တွေကိုပြန်ရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ ငါ Hitatchi Wands ၏ Thoes တ ဦး တည်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်
“ သေသောယောနိရောဂါသည်စစ်မှန်သောအရာ” လား။
[ဒီတစျ ", သေလိင်အင်္ဂါ Syndrome" debunk တစ်သုတေသီအပေါ်မှီခိုပေမယ့် Lab ထဲမှာတုန်ခါမှုအစွမ်းသတ္တိကိုစမျးသပျတဲ့စက္ကူ ... မျှအမှန်တကယ်ဘာသာရပ်များမှဆက်သွယ်]
ခင်ဗျားပြောတာကသေလွန်သောသူတို့သည်လိင်အင်္ဂါ Syndromeအွန်လိုင်းကိုလှည့်ပတ်သွားသည်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးနောက်ကွယ်မှအကြံအစည်ကိုကြားလိုက်ရသည်။ သင်၏တုန်ခါမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ယောနိကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ဒီပြောဆိုချက်မှာသိပ္ပံနည်းကျအခြေခံရှိသလား။ ဒါမှမဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေတာဟာနောက်ထပ်ဒဏ္thာရီတစ်ခုလား။
သူကံကောင်းတာက, အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ psychophysiologist နီကိုးလ် Prause, Ph.D ဘွဲ့ကို, လေ့လာခဲ့ Dead Vagina Syndrome အကြောင်းကိုပြောဆိုရန်အချက်အလက်မရှိပါဟု vibrators ၏သက်ရောက်မှုများကဆိုသည်။
တစ်ဦး vibrator ကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့အာရုံကြောကိုပျက်စီးစေနိုင်သလား?
အခြေခံခန္ဓာဗေဒနဲ့စတင်ဖွင့်ကြပါစို့။ အဆိုပါ pudendal အာရုံကြောများ၏ dorsal နျဌာနခှဲအသီးသီးအစေ့နှင့်လိင်တံမှအာရုံခံစားမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတုန်ခါမှုခံစားရသော receptors, ဖိအား, အပူချိန်, နှင့်အပူ / အအေးကဲ့သို့အခြားအာရုံရှိသည်။
ဤတွင်သော်လည်းပျော်စရာတကယ်တော့ပါ! Clitoris နှင့်လိင်တံတွင်အမျိုးမျိုးသော receptors များရှိသည်။ Clitoris တွင် receptor များရှိပြီး5မှ 15 Hz အကြားရှိတုန်ခါမှုကိုပိုမိုထိရောက်သောလိင်တံသည်ပိုမိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း (250Hz) နှင့်ပိုမိုထိတွေ့နိုင်သည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အတွက်တုန်ခါမှုအကြားခြားနားချက်ရှိနိုင်သည်။ ယခုအချိန်အထိဤသုတေသနအပေါ်မရှိ။
ကျနော်တို့တုန်ခါမှုမှ sensitivity ကိုအတွက်သဘာဝနှင့်ယာယီကျဆင်းခြင်းရှိပါတယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြဘူး။ ဤသည်ကိုလည်းထိတွေ့နှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ကိုဆိုလိုသည်အားလုံးတစ်ဦးအနေဖြင့်ပြီးနောက်, သငျသညျတူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ဆက်လက်အချို့လမ်းများတွင် input ကို (ဆိုလိုသည်မှာတုန်ခါ) ကိုပြောင်းလဲရန်ရှိသည်သွားကြသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သင်, အမြန်နှုန်း, ပြင်းထန်မှု switching အားဖြင့်တုန်ခါအမျိုးအစားများဒီလိုဆောင်ရွက်, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးကွာ vibrator ထံမှအချို့သောအချိန်ယူပြီးနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာဂျင်းရဲ့မေးခွန်းကိုကြွလာသည့်အခါငါသည်ဤပြောရှိသည်: ကွဲပြားခြားနားသော databases ကိုတစ်စေ့စေ့စပ်စပ်ရှာဖွေပြီးနောက်ကျွန်မအာရုံကြောပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေ vibrators အကြောင်းတစ်ခုတည်းဆောင်းပါးမတှေ့နိုငျတယျ။ အခုတော့တစ်ဦးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဆောင်းပါးထွက်ရှိမရှိရုံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘယ်တော့မှရှိပါတယ်သို့မဟုတ်ဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှနိုင်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ ငါဇီဝကမ္မကမေးခွန်းထဲကမဟုတ်ကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ, ငါတို့ရှိသမျှသည်နေ့ရက်သည် jack ကို-သံတူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သူတွေကိုအာရုံကြောနှင့်လက်မောင်းပြဿနာများကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏ကြီးမြတ်သောအန္တရာယ်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရကြ၏။ ငါသည်သင်တို့ကိုတတန်းအတွက်နေ့ရက်များစွာအဘို့, အဆုံးပေါ်နာရီ high-ပြင်းထန်မှု vibrator သုံးစွဲဖို့ဖြစ်လျှင်ထို့နောက်ဟုတ်ကဲ့, သင်ဖြစ်ကောင်းအာရုံကြောအချို့ယားယံသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းထင်။